Mon, May 28, 2018 | 03:19:06 NST
स्याङ्जाका कृषि सेवा केन्द्रका भवनहरु जीर्ण
स्याङ्जा, कात्तिक ६ – स्याङ्जाका अधिकांश कृषि सेवा केन्द्रका भवन जीर्ण हुँदा गएपछि काम प्रभावित हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०४३/०४४ मा निर्माण भएका सेवा केन्द्रका भवनहरु समय अनुसार मर्मत सम्भार नहु“दा जीर्ण बन्दै गएका हुन् ।
कोशीटप्पु आरक्षमा २ सय ५९ अर्ना
सुमन पुरी/उज्यालो सुनसरी, कात्तिक ४ – कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा अर्नाको संख्या बढेर २ सय ५९ पुगेको छ । यसअघि गरिएको गणनामा २ सय १९ वटा मात्रै अर्ना रहेकोमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अर्नाको संख्या ४० ले बढेर २ सय ५९ पुगेको हो ।
भारतबाट सोझै मल किन्न दिनुपर्ने किसानको माग
नवलपरासी, कात्तिक ३ – नवलपरासीका किसानले चिनी, चामल र अन्य उपभोग्य वस्तु जस्तै रासायनिक मल पनि उपभोक्ता आफैले भारतबाट सोझै भन्सार तिरेर ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दशैंको बेला किसानलाई धान काट्ने चटारो
काठमाडौं, कात्तिक २ – दशैंको बेला धेरै ठाउँका किसानलाई धान काट्ने चटारो छ । तराईका किसानले भदैया धान काटेर खाली रहेको जग्गामा तरकारी लगाईसकेका छन् । काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा धमाधम धान काट्ने काम भैरहेको छ ।
काठमाडौ, असोज ३० – आज विश्व खाद्य दिवस, बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । कृषिको उब्जनी बढाएर खाद्य सुरक्षाको संरक्षणका लागि जोड दिँदै आज बिभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् । खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने ‘खाद्य स्वच्छता दिवस’ नाम दिएर एक महिनापछि मात्र यो दिवस मनाउने भएको छ ।
किसानको जीवनस्तर किन सुध्रेन ?
काठमाडौ, असोज २७ – साना किसानहरुको समुह राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालले उन्नत खेती प्रविधि र कृषि औजारको प्रयोगलाई प्रत्येक किसानसम्म पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरेको छ । कृषक समुहको अबस्था र स्रोत साधनमा पहुँचका बिषयमा चार जिल्लाका १२ किसान समुहमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महासंघले मल र बिऊबिजन समयमा पाउन नसक्दा किसानको जीवनस्तर सुध्रन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
भैंसीको संख्या घटेपछि पाडापाडी हुर्काउने कार्यक्रम
विनोद चौलागाई/ उज्यालो । काठमाडौं, असोज २७ – केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवर्द्धन कार्यालयले भैंसीको संख्या बढाउन पकेट क्षेत्र मानिएको ११ जिल्लामा पाडापाडी हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भैंसीको संख्या घट्दै गएको, मासुको प्रयोजनका लागि भैंसी वध गर्ने क्रम बढेको र मुल्य आकासिएकाले सरकारले भैंसीको कमी हुन नदिनका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
दशै तिहारमा पानी पर्दैन : मौसमविद्
काठमाडौ, असोज २६ – चिसो बढ्दै गएपनि यसपटक दशै तिहारमा पानी नपर्ने भएको छ । मनसुन सकिएको र पश्चिमी वायुको प्रभाव नदेखिने भएपछि दशै तिहारमा पानी नपर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् ईन्द्रविक्रम सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
स्याङ्जामा दुग्ध प्रसोधन केन्द्रको भवन शिलान्यास
स्याङजा, असोज २५ – स्याङ्जाको तिन्दोवाटे गाविस ५ पाठेखोलामा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र भवन बन्ने भएको छ । मिलन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)को सहयोगमा भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।
ब्यवसाय नै बन्यो कम्पोष्ट मल उत्पादन
दुर्गाप्रसाद शर्मा/उज्यालो पर्वत, असोज २४ – धेरै उब्जनी हुने भन्दै पहिले रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने किसानहरु हिजोआज कम्पोष्ट मलको प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यसैले गाउँघरमा हिजोआज कम्पोष्ट मलको माग पनि बढेको छ । कुहिएर वनमा खेर जाने पात पतिङ्गर प्रयोग गरेर पर्वतको मुडिकुवा गाविसका किसानले भने कम्पोष्ट मल बनाउने ब्यवसाय नै शुरु गरेका छन् ।
गाईभैंसीको कृत्रिम गर्भाधानका लागि चाहिने तरल नाईट्रोजन अभाव
काठमाडौं, असोज १९ – राष्ट्रिय पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापना भएका सामुदायिक पशु प्रजनन् केन्द्रहरुमा गाईभैंसीको कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक पर्ने तरल नाईट्रोजन अभाव भएको छ । लोडसेडिङ बढेको भन्दै व्यापारीहरुले भाउ बढाएपछि तरल नाईट्रोजनको अभाव भएको हो ।
मर्ने बेलामा त सुख दिउँ!
काठमाडौं – पशुपंक्षीबाट मान्छेले धेरै लाभ लिएका छन् । दुध, मासु, अण्डा, ऊन, छाला आफुले चाहे अनुसार उपयोग गर्दै आएपनि यति धेरै गुणकारी पशुपंक्षीप्रति उत्तिकै निर्दयी छन् मान्छे । विदेशमा यसबारेमा धेरै बहस हुनेगरे पनि मानव अधिकारकै स्थीति बलियो नभएको हाम्रो देशमा यसबारेमा धेरै ध्यान दिईन्न ।
बाख्रापालन कसरी विस्तार गर्न सकिएला ?
काठमाडौ, असोज १६ – वाख्रापालन व्यवसायलाई विस्तार गर्न नयाँ नीति र योजना ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । केही दिनअघि काठमाडौमा भएको बाख्रापालक किसान र विशेषज्ञहरुको भेलाले बाख्रा विकास तथा अनुसन्धानको लागि राष्ट्रिय नीतिमा जोड दिएको हो ।
पोखरामा गोदावारी प्रदर्शनी तथा पुष्प व्यापार मेलाको तयारी
पोखरा, असोज १५ – पोखरामा पहिलो पटक क्षेत्रीय गोदावारी प्रदर्शनी एवं पुष्प व्यापार मेला हुने भएको छ । 'पोखराको प्रकृति र सुन्दरतामा शान, पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धनमा वातवरणीय पहिचान' भन्ने उद्घोषका साथ फ्लोरिकल्चर एशोसियसन नेपाल कास्कीले कार्तिक २३ गतेदेखि पुष्प मेला गर्न लागेको हो ।
चितवनमा चराविद्हरुको भेला
काठमाडौ, असोज १४ – नेपालका चराहरुको बारेमा गहन छलफलका लागि देशैभरका चराविद्हरु चितवनमा भेला भएका छन् । चराहरुको अवस्था, उनीहरुको बास स्थान, संख्या र भौगोलिक क्षेत्रका विषयमा गहन छलफल गर्न देशैभरका चराविद् र चराका विषयमा रुची राख्नेहरु चितवनमा भेला भएका हुन् ।
हिउँदे तरकारी रोप्ने सिजन शुरु
काठमाडौ, असोज १४ – धेरै किसान बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएपनि मौसमी खेतीको क्रम पनि बढिरहेको कृषि विज्ञले बताएका छन् । विज्ञहरुका अनुसार आर्थिक हिसाबले बेमौसमी तरकारीबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ । तर बेमौसमीमा भन्दा मौसमी तरकारी बढी गुणस्तरीय हुन्छ ।
मनसुन सकिएको औपचारिक घोषणा
काठमाडौ, असोज १४ – मनसुन सकिएपनि केही दिन दिउँसो वा बेलुकीपख हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद् इन्द्रविक्रम सिंहका अनुसार यसवर्षको मनसुन शनिवारदेखि सकिएको औपचारिक घोषणा भएको हो ।
गाउँलेहरु घोरल संरक्षणमा जुटे
विद्रोही गिरी/उज्यालो । नवलपरासी, असोज १३ – नवलपरासीका बिभिन्न गाविसका वासिन्दाले महाभारत क्षेत्रलाई घोरल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी लोपोन्मुख जनावर घोरलको संरक्षण गर्न थालेका छन् । घोरलको संरक्षणमा राज्यले चासो नदेखाउँदा शिकार बढ्न सक्ने भनदै स्थानीय वासिन्दा आफै घोरल संरक्षणमा लागेका हुन् ।
गाउँका नेताहरु बाख्रा गोठालो
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, असोज १३ – लमजुङको गिलुङ गाउँका वासिन्दा हिजोआज बाख्रापालन तर्फ आकर्षित भएका छन् । बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्नेमा बिभिन्न राजनीतिक दलका गाउँस्तरका नेताहरु अगाडि छन् । उनीहरु आफै बाख्राको स्याहार सुसार गर्ने र गोठालो जाने गर्छन् ।
आगलागीबाट ध्वस्त कृषि फर्म फेरि सञ्चालनको तयारी
राधाकृष्ण डुम्रे/उज्यालो । स्याङजा, असोज ११ – दुई महिनाअघि आगलागी भएको स्याङजाको साँखर गाविस ५ सर्लाहीमा रहेको मेलमिलाप कृषि प्रडक्सन प्रालि फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ । आगलागीबाट ध्वस्त भएको बाख्रापालन फर्मलाई सञ्चालनमा ल्याउन ८ जना सञ्चालकले निर्माण कार्य शुरु गरेका छन् ।
बाख्राबारे छलफल गर्न गोष्ठी
काठमाडौ, असोज ११ – बाख्रा व्यवसायको लागि अनुसन्धान तथा विकास रणनीति तय गर्न काठमाडौको गोकर्णमा बिहीबार गोष्ठी शुरु हुँदैछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क, पशुसेवा विभाग र अरु गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा शुरु हुन लागेको कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, किसान र व्यवसायी सहभागी हुँदैछन् ।
कृषि र पशु विकासका लागि बिभिन्न संस्था खुल्ने
काठमाडौ, असोज १० – कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न संस्थाहरु खुल्ने भएका छन् । कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको ४४ औ परिषद वैठकले बुधवार हरितक्रान्तिका प्रणेता डा. नोर्मन बोर्लगको नाममा दक्षिण एशियाली स्तरको बोर्लग इन्ष्टिच्युट नेपालमा खोल्ने स्वीकृति दिएको छ ।
शहरका घरहरुमा वायोग्याँस, ३० प्रतिशत एलपी ग्याँस वचत हुने
हिम विष्ट/उज्यालो । काठमाडौ, असोज १० – हरेक घरमा खाना पकाउने ग्याँस ३० प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले शहरी घरेलु वायोग्याँस प्लान्ट कार्यक्रम सुरु गरेको छ । घरबाट निस्कने फोहोरबाट सञ्चालन हुने वायोग्याँस सञ्चालनका लागि सुरुमा काठमाडौ उपत्यकाका एक हजार घरधुरीमा जडान गरिने बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
४० प्रतिशत विद्यालयमा छात्रा शौचालय
काठमाडौ, असोज १० – पछिल्लो समयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालय बनाउने क्रम बढेको छ । काठमाडौको बसन्तपुरमा भएको कार्यक्रममा देशभरका ४० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालय बनेको जानकारी दिईएको छ ।
पर्याप्त बर्षा नहुँदा उखु फस्टाएन
जनार्दन पोखरेल/ उज्यालो । महोत्तरी, असोज १० – पर्याप्त बर्षा नहुँदा यस वर्ष महोत्तरीमा उखुको उत्पादन घट्ने भएको छ । उखु बढ्ने सिजन असार, साउन, भदौ महिनामा यस बर्ष पर्याप्त बर्षा नहुँदा महोत्तरीमा उखुको उत्पादन घट्ने भएको हो ।
मकैको उत्पादन बढाउन हाइब्रीड जातको परीक्षण
काठमाडौं, असोज १० – मकैको उत्पादन बढाउन दुईवटा हाइब्रीड जातको परीक्षण भैरहेको छ । यसअघि सिफारिस गरिएको गौरब भन्ने जात किसानमाझ लोकप्रिय हुन नसकेपछि अरु दुई जातको अध्ययन शुरु गरिएको हो ।
भक्तपुरमा गाँठे रोगले काउली नष्ट
रमेश गिरी/उज्यालो । भक्तपुर, असोज ९ – काउलीको बोटमा गाँठे रोग लागेपछि भक्तपुरका किसान मर्कामा परेका छन् । दशैमा बिक्री गर्न मिल्ने गरी रोपिएको काउली फल्ने बेलामा बोट मर्न थालेपछि जिल्लाका विभिन्न गाविसका सयौ रोपनी जग्गामा लगाईएको काउली नष्ट भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।
मनाङमा स्याउ टिप्ने मौसम शुरु
लमजुङ, असोज ८ – हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा स्याउ टिप्ने मौसम शुरु भएको छ । मनाङमा असोजको पहिलो हप्तादेखि स्याउ टिप्न शुरु भएको हो । मनाङमा लाखौं रुपैया बराबरको स्याउ उत्पादन हुने गरेपनि ढुवानीको समस्याले गर्दा स्थानीय वासिन्दाले स्याउवाट खासै आम्दानी लिन सकेका छैनन् ।
गरीबलाई फाइदा पुग्ने कृषि योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौ, असोज ८ – प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले साना र गरीब किसानलाई फाइदा पुग्नेगरी नयाँ नयाँ कृषि योजना बनाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति समीक्षा एवं कृषि विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले साना र गरीब किसानलाई बढी अनुदान दिने खालका योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
काठमाडौं, असोज ७ - राष्ट्रिय संरक्षण दिवस, वन्यजन्तु अपराध रोकौं, गैंडा बचाऔं भन्ने नाराका साथ बिभिन्न कार्यक्रम गरी आइतवार मनाईंदैछ । २०६३ साल असोज ७ गते ताप्लेजुङको धुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी तत्कालिन वनमन्त्री सहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण संरक्षणकर्मी लगायत २४ जनाको निधन भएको सम्झनामा यो दिवस मनाइने गरिन्छ ।
पंक्षी संरक्षणकर्मी तथा नेचर गाईडको भेला
चितवन, असोज ६ - पंक्षी संरक्षणमा काम गर्दै आएका बिज्ञ तथा (नेचर गाईड) पथ प्रर्दशकहरुको भेला सौराहामा शुरु भएको छ । सिमसारमा बस्ने चराको संरक्षण तथा सिमसारको सदुपयोगका बिषयमा छलफल गर्न उनीहरु भेला भएका हुन् । भेलाको शनिवार बिहान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादवले उद्घाटन गर्नुभयो ।
गैंडा संरक्षण दिवस मनाईदै
चितवन, असोज ६ - तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय गैडा दिवस शनिवार बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । नेपालमा अघिल्लो बर्षअघिदेखि मात्र गैंडा दिवस मनाउन लागिएको हो । गैंडा दिवसका अवसरमा संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशील बिभिन्न संघसंस्थाको सहयोग र सहभागितामा निकुञ्ज उपभोक्ता समिति बछौलीले सचेतना र्‍याली, चित्रकला प्रतियोगिता, र निबन्ध प्रतियोगिता गर्दैछ ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय ओजोन तह संरक्षण दिवस
काठमाडौं, भदौ ३१ – आज अन्तर्राष्ट्रिय ओजोन तह संरक्षण दिवस । ‘भावी पुस्ताका लागि हाम्रो वायूमण्डलको रक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाईंदैछ । पृथ्वीको रक्षा कवचको रुपमा रहेको ओजोन तहमा क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) लगायत ग्यासले क्षती पुर्‍याएर ओजोन तह पातलिँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसको संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम भईरहेका छन् ।
कृषकका कुराः ‘गरे के हुन्न ?’
राजेन्द्र कार्की/ उज्यालो । जाजरकोट, भदौ ३० – चार वर्ष पहिलेसम्म जाजरकोट जगतीपुर गाविस वडा नं ७ कुस्तरा गाउँका बासिन्दा आम्दानीको भरपर्दो श्रोत नहुँदा गुजारा चलाउन मजदुरीका लागि भारत धाउनु पर्थ्यो । सिंचाई सुविधा नहुँदा गाउभरीकै जमिन सुख्खा थियो । अन्न बालीको उत्पादन असम्भव जस्तै थियो ।
लिबियामा मापन गरिएको विश्वकै बढी तापक्रम अमान्य घोषित
भदौ ३० – विश्व जलवायु संगठनले ९० वर्ष अघि लिबियाको अल अजिजियामा मापन गरिएको भनिएको अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी तापक्रमलाई अमान्य घोषित गरेको छ । तापक्रम मापनमा केही त्रुटि भेटिएको भन्दै संगठनले त्यसलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।
उच्च पहाडमा चिसो सहने धान सिफारिशको तयारी
काठमाडौ, भदौ ३० – उच्च पहाडी क्षेत्रका किसानले अर्को वर्षसम्म नयाँ जातको धान पाउने भएका छन् । लेकाली १ र लेकाली २ नामको जात पोहोर नै प्रस्ताव भैसकेकाले अर्को वर्षसम्म सिफारिस भैसक्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले जनाएको छ ।
सिन्दुरे रोग नलाग्ने दुईथरि गहुँ सिफारिश
काठमाडौ, भदौ २९ – नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कले दुई जातका नयाँ गहुँका बिउ सिफारिश गरेको छ । नार्कले गौरा र धौलागिरी नामका दुई थरी गहुँका बिउ केही दिनअघि सिफारिश गरेको हो । नेपालका पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिश गरिएका यी जातका गहुँ पहेंलो सिन्दुरे रोग अवरोधी भएको राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक श्रोत केन्द्रका प्रमुख मदनराज भट्टले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
आज दिउँसो पनि पानी पर्ने अनुमान
काठमाडौ, भदौ २९ – काठमाडौ सहित देशका धेरै ठाउँमा बिहीबारराति पनि पानी परेको छ । शुक्रवार पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पूर्वी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाई छ ।
यसवर्षको मनसुन अन्तिम अवस्थामा
काठमाडौ, भदौ २८ – अन्तिम अवस्थामा यसवर्षको मनसुन सक्रिय भएको छ । बुधवारदेखि देशभर मनसुन सक्रिय भएको जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । दिनभर घाम लागेपनि धेरै ठाउँमा राती वर्षा हुने गरेको छ । बुधवारराती पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको छ ।
युरिया उपचारित पराल पोषण युक्त पशु आहारा
विद्रोही गिरी/उज्यालो । नवलपरासी, भदौ २७ - हरियो घाँस खेतीको अभावमा पशुपालनमा समस्या भएको भए अब आत्तिनु पर्दैन घरमा भएको पराल, गहुँ र कोदोको छ्वालीले पनि हरियो घाँसले जत्तिकै पशुलाई प्रोटिन दिन सक्छ । ब्यवसायिक घाँसखेती नहुँदा किसानलाई पशुपालनमा समस्या भएकाले थोरै लगानीमा पशु आहारको रुपमा पराललाई लिन सकिने जिल्ला पशु सेवा कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।